ग्रामीण विकासको अवधारणा – ebaglung.com
ग्रामीण विकासको अवधारणा
२०७६ असार २९, आईतवार १४:५७	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
— कृष्ण कुमारी वास्तोला
विकास निरन्तर चलिरहने सकरात्मक परिवर्तनको प्रकिया हो । एउटा सानो परिधिभित्र विकासलाई परिभाषित गन सकिदैन । बहुआयामिक अवधारणा अंगालेको विकासले कुनै पनि देश, भूगोल, समय, परिवेश र परिस्थितिलाई सम्हाल्दै आफ्नो परिभाषामा अर्थ मिसाएको हुन्छ । कुनै एक ठाउँमा परिभाषा दिएको विकासले अर्को ठाउँमा आफ्नो सैद्धान्तिक कब्जा भने जमाउन सक्दैन । हरेक परिवेशमा सामाजिक ,राजनैतिक, आर्थिक, सास्कृतिक विविधतासँगको परिवेश सहितको विकासले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको हुन्छ । साथै मनोवैज्ञानिक र संवेगात्मक विकासले पनि उत्तिकै पकड जमाएको पाइन्छ ।
Rostow र Amartye Sen जस्ता विव्दानहरुले आर्थिक विकास र स्वतन्त्रताको फराकिलोपनलाई विकाससँग मिसाउदै आफ्नो व्याख्या दिएको पाइन्छ । जे होस् विकास एउटा सकरात्मक परिवर्तनको पक्षधर हो । विकासका परिभाषालाई नेपाल र यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रको परिवेशलाई समेटेर हेर्नु त्यतिकै अपरिहार्य देखिन्छ । सहरी क्षेत्रले भन्दा बढि ग्रामीण क्षेत्रले पकड जमाएको हाम्रो जस्तो देशमा के सैद्धान्तिक विकास र व्यवहारिक विकासको तालमेल मिलेको छ वा छैन । अर्थात कसरी त्यसको व्यवस्थापन गरिनु पलौ भन्ने सोच्ने समय हामीसँग हुनुपर्दछ ।
ग्रामीण क्षेत्रको विकासकोलागि केन्द्रिय नीतिलाई अवलम्बन गर्ने कि स्थानीय नीतिलाई भन्ने दुविधाले पनि कहिकहिँ समस्यामा पारेको देखिन्छ । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले विकास गर्न सकेन भनेर देशको राजनैतिक परिवर्तनसँगै संघीय व्यवस्थाको परिकल्पनामा देश अघि बढेको छ । संघीय संरचनाले मात्र विकास हुने पनि होईन त्यसकालागि विकासका दुई पाटामा ध्यान दिन जरुरी छ । विकास बटम अप र टप डाउन अबधारणा हुन आवश्यक छ । दुबैका आआफ्नै सवल र दुर्वल पक्ष छन् । ग्रामीण विकासमा दुबै अबधारणालाई समन्वयन गरेर मिश्रित रुपमा लैजानु पर्ने देखिन्छ । समन्वयन बिना दुरी राखेर गरिएको विकास दीर्घकालीन हुुुदैन ।
जे होस् विकासका पक्षधरहरुले विकासका निति वनाउन एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न गहन तहमा रहेर ग्रामीण रहनसहन, जीवनपद्दति र हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको पहुँच के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्धाधुन्द गरिएका विकासका पहलहरुले वालुवामा पानी खन्याय जस्तै हो भन्नुमा कुनै दुई मत छैन । विकासमा दीर्घकालीन र दिगोपन हुनु जरुरी देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाको विस्तार , सामान्य आवश्यकताहरुमा पहुँच पुर्याउन सकेमा मात्र पनि विकासले एक खुड्को पार गर्न सक्छ । त्यस्तै गरि चेतना, सूचना प्रविधिको विकास र गरिवि हटाउन चालिएका कदमहरुले पनि ग्रामीण विकासमा योगदान पुर्याउछ । दक्ष जनशतिm नहुनु, भएका जनशतिm पनि विदेशिनु, वृध जमातले आधुनिकरणलाई अगाल्न नसक्नु पनि ग्रामीण विकासको अप्ठेरो खुड्किलाको रुपमा रहेको पाइन्छ ।
राज्यले बर्षौ शिक्षित दक्ष जनशतिm तयार पारिरहेको छ तर देश विकासको प्रयोजनको लागि भन्दा पनि वैदेशिक पलायनको लागि । हजारौ संख्यामा पलायन हुने शृंखला बढिरहदा देशले विकासको वाटो पछ्याउन सकिरहेको छैन । शिक्षित युवा जमातहरु आपm्नो देशको दुरदराजमा गएर काम, सेवा गर्ने कुरामा भन्दा बढि विदेशिनुमा आफुलाई गौरववान् मान्छन् । यसो हुनुमा कहिँकतै पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक सामाजिकरण प्रक्रियामै कमजोरी भयो कि ? अधिकाशंको सोचशिक्षा, ज्ञान, विवेक र वुद्धि भन्दा सम्पति÷पैसालाई महत्व दिने परिपाटीले गर्दा धनी र गरिब बिचको खाडलले बिकराल रुप लिई रहेको पाइन्छ । अर्थोपार्जन गर्नु घर भवन निमार्ण गर्नु लाई मात्र बिकासको धरोहरको रुपामा बुझ्नु कत्तिको न्याय संगत होला ? विश्वव्यापापीकरणले संसारलाई सागुरो वनाउदै गएको परिवेशमा के नेपालले ग्रामिण विकासलाई मुख्य विषयवस्तुको रुपमा केन्द्रमा ल्याउन सक्ला ?
ग्रामीण विकासलई जोड दिन ग्रामीणस्तरमा शिक्षा र जनचेतनालाई जोड दिनुपर्छ । शिक्षित वर्गलाई आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने माहोल बनाइदिनु पर्छ । शिक्षित वर्गले पनि आफ्नो गाउँ विकास गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पनि हो भनेर मनन गर्नुपर्छ । स्थानिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरि दिगोपन सँग जोडेर विकासका कदमहरु अगाडी बढाउनु पर्छ । बेरोजगारी समस्या हटाउने, गरिवी हटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासे पाटाहरुमा पहुच बढाउने गनुपर्छ ।
२०७६ असार २९ ।
(लेखिका: तमानखोला गाउँपालिकाकी रोजगार संयोजक हुन् ।)